လူမှုဘဝ Archives - Central Online News
ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုံရတီကတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ပထမဦးဆုံး ဆုံခဲ့တဲ့ “ဧည့်သည်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ အတူတူသရုပ်ဆောင်ရင်း ဖူးစာဆုံခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုံက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချစ်ခဲ့ကြပြီး ချစ်သူသက်တမ်းခဏလေးအတွင်းမှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမယ့် အများကအားကျရလောက်တဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း နေနဲ့လ၊ ရွှေနဲ့မြလို လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ ရွှေနှစ်ရွှေစုံတွဲလေးရဲ့ […]
ဦးဗေကြောင့် ကျွန်တော့်ကို ပရိသတ်တွေ သိလာကြတာပါလို့ ဆိုလာတဲ့ ဒိန်းဒေါင်
ဒိန်းဒေါင်ကတော့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်မဖြစ်ခင် ဆိုင်းသမားဘဝတုန်းက ဗေလုဝရဲ့ ကျေးဇူးတွေ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာပါတယ်။ ဒိန်းဒေါင်ကတော့ သူ့ရဲ့ အပေါ် ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ ဗေလုဝက ပထမဆုံးလူပါလို့ ဆိုပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်လောကထဲကို မဝင်ရောက်ခင်ကတည်းက ကူညီပေးခဲ့သူပါလို့ ပြောပြလာပါတယ်။ “ ဦးဗေဆိုတာက ဒိန်းဒေါင်ရယ်လို့ ပရိသတ်သိအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ […]
ဘဝတွေ ခါးသီးလွန်းလို့ သေတာမှ ကောင်းသေးတယ် တဲ့လား 😭😭😭ကျွန်မ အသိနောက်ကျခဲ့ပြန်ပီ။ မနေ့က ” စုံညီပွဲတော်မှာ က,​ချင်လို့ သူသား ရထားတဲ့ ပညာရေးထောက်ပံ့ကြေးငွေ ၂သောင်းကျပ်ကို သူ့ဆေးဖိုးအတွက် မသုံးတော့ပါဘူး။ ရှမ်းဝတ်စုံလေး တစ်စုံ ဝယ်ပေးပါ” ဆိုပြီး ၄မိုင်လောက် ဝေးတဲ့ကျောင်းကို တုတ်ကောက်နဲ့ သမီးပေါက်စ […]
မဟာသမယသုတ်ကို ပူဇော်သူများရှင့် မဟာသမယသုတ်က တကယ်တော့ ၇သုတ်ရှိပါတယ် ဒါလဲ သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါနော် (၁)မဟာသမယသုတ် အပိုဒ်ငယ် ၃၉ပုဒ် (၂)သမ္မာပရိဗ္ဗာဇနီယသုတ် (၃)ပုရာဘေဒသုတ် (၄)ကလဟဝိဝါဒသုတ် (၅)စူဠဗျူဟသုတ် (၆)မဟာဗျူဟသုတ် (၇)တုဝဋကသုတ် ၇သုတ် ရှိပါတယ် ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေ ခွဲမရဖြစ်နေတာက မဟာသမယသုတ်ဆိုတာ […]
မေး။ ယခုခေတ် အနောက်တိုင်းဆေးပညာတွင် သေခါနီးလူနာကိုဝေဒနာသက်သာအောင် morphine based medicine (ဘိန်းနှင့် သဘောချင်းတူသော၊ ဘိန်းမှထုတ်လုပ်သော ဆေး) ပေးပြီး၊ agitation (စိတ်ကြမ်းဝင်ချင်း)သက်သာအောင် diazepam based medicine (စိတ်ငြိမ်ဆေး) ပေးတတ်ပါသည်။ ထိုဆေးများသည် မူးယစ်ဆေးမျိုးထဲတွင်ပါဝင်ပြီး (ဥပမာအားဖြင့် morphine သည် နံပါတ်ဖိုး/diamorphine […]
ရေမချိုးသူတို့‌နေထိုင်ရာ (သို့) အဲန်‌လူမျိုးတို့ရွာ ပရဟိတ ခရီးကြမ်း. (ဒီ‌နေ့ည ရွာမှာအိပ်‌ပြီး မနက်‌ဖြန်‌ ‌နောက်‌တစ်‌ရွာ). ?? (ပုံတွေအောက်မှာစာ) Credit-Sai LuKhay